13PCS 3PLY COPPER CLAD BODY COOKWARE SET - နယူးရှိုင်းဟတ်စက်
သံမဏိထမင်းချက်အိုးလက်ကား & ထုတ်လုပ်သူများ
18pcs 3ply အားလုံးဝတ်သံမဏိထမင်းချက်ပစ္စည်းအစုံ
12pcs 5ply အားလုံးဝတ်သံမဏိထမင်းချက်ပစ္စည်းအစုံ
5ခန္ဓာကိုယ် induction Saucepan ply
5ခန္ဓာကိုယ် induction Casserole ply
5ply Copper Core ကိုယ်ထည် Pan Pan-SC120
Tri-ply အားလုံးဝတ်သံမဏိ Cookware
3အားလုံးဝတ်သံမဏိ ply 304 ခေါက်ဆွဲအိုး
3ခန္ဓာကိုယ် induction Saucepan ply
7ခန္ဓာကိုယ် induction Cookware အစုံ 3cs
9Tri-ply မီးဖိုချောင်သုံး Set
Tri-ply အားလုံးဝတ်ကြေးနီ Cookware
10pcs 3ply ကြေးနီအဝတ်ခန္ဓာကိုယ်ထမင်းပေါင်းအိုးများထားရှိ
12pcs 3ply ကြေးနီအဝတ်ခန္ဓာကိုယ်ထမင်းပေါင်းအိုးများထားရှိ
103cs Copper Hammered Body Cookware Set-sc064
Tri-ply ခန္ဓာကိုယ်ကကြေးနီပိတ် Hammer Finish ကို Casserole
5အားလုံးဝတ်ကြေးနီ Core Cookware
10pcs 5ply ကြေးနီခန္ဓာကိုယ်ထမင်းပေါင်းအိုးများ
8pcs 5ply ကြေးနီခန္ဓာကိုယ်ထမင်းပေါင်းအိုးများ
5ခန္ဓာကိုယ်ကြေးနီ Core Saucepot ply
5ခန္ဓာကိုယ်ကကြေးနီ Core ပြားချပ်ချပ် ply
10pcs 5ply Copper Core ကိုယ်ထည်ပြင်ဆင်ထားသောပစ္စည်းများ - sc159
Rim Cookware ကိုလှိမ့်ထားသည်
28ကျယ်ပြန့်လှိမ့် Edge ထမင်းချက်အိုး Set-sc222
15ကျယ်ပြန့်လှိမ့် Edge ထမင်းချက်အိုး Set-sc511
17ကျယ်ပြန့်လှိမ့် Edge ထမင်းချက်အိုး Set-sc721
16ကျယ်ပြန့်သောလိပ်ထားသော Edge Cookware Set-sc580
Wide Rolled Edge အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက် Skillet-sc352
17ကျယ်ပြန့်လှိမ့် Edge ထမင်းချက်အိုး Set-sc724
ကျယ်ပြန့်လှိမ့် Edgestock အိုး -sc224
နေအိမ် » ထုတ်ကုန် » Tri-ply အားလုံးဝတ်ကြေးနီ Cookware » 13PCS 3PLY COPPER CLAD BODY COOKWARE SET
7PCS ထိခိုက်ပျက်စီးမှု COOKWARE SET-SC451
10PCS 3PLY ကြေးနီဝတ်ထည်သော COOKWARE SET-SC064
3PLY HAMMERED ကြေးနီဝတ်ခန္ဓာကိုယ် FRYPAN-SC062
3ဝတ်ဆင်ထားသည့်ကြေးဝါအားလုံး PASTA COOKER-SC060 ကိုပိတ်ထားပါ
3PLY ခန္ဓာကိုယ်ကြေးနီဝတ် HAMMER ပြီးသော CASSEROLE-SC063
3အလွှာထည်ခန္ဓာကိုယ် SAUCEPAN-SC057 ကိုထုထည်ထိုးပါ
3PL-POT0 SC056 အားလုံးကိုပိတ်ထားပါ
3PLAS လုပ်ထားသည့်အဝတ်အစားအားလုံး PASTA COOKER-SC055
3PLY FRANPAN-SC054 အားလုံးဝတ်ဆင်ထားပါ
3PLUC SAUCEPAN-SC053 အားလုံးခင်းပြီးသွပ်ပါစေ
10PCs 3PLY အားလုံးသံမဏိ COOKWARE SET-SC052 ကိုအကာအကွယ်ပေးသည်
8သက်ရောက်မှုအောက်ခြေ Cookware Set
Dome အဖုံးနှင့်အတူ Frypan
12အောက်ခြေ Cookware အစုံသက်ရောက်မှု pcs
10အောက်ခြေ Cookware အစုံသက်ရောက်မှု pcs
KA656A ဘဲဥပုံ roaster ဒယ်အိုး
KA506 Griddle ပန်
KA504 Griddle ပန်
KA501 Griddle ပန်
KA478 နှစ်ဆ Wall Bowl
KA477 အရည်အသွေးမြင့်သုပ် Bowl
KA428 အရည်အသွေးမြင့်သုပ် Bowl
KA421 အရည်အသွေးမြင့်သုပ် Bowl
9pcs Tri-ply အားလုံးဝတ်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ -sc067
3အားလုံးဝတ်ခန္ဓာကိုယ် Induction Cookware Set-sc570 ply
3အားလုံးဝတ်သံမဏိ ply 304 ခေါက်ဆွဲ cooker-sc100
3အားလုံးဝတ်ဆင်ထားသောခန္ဓာကိုယ် 9pcs Apple Shape Cookware Set-sc569
18pcs 3ply အားလုံးဝတ်သံမဏိထမင်းပေါင်းအိုး Set-sc018
5အားလုံးဝတ်ခန္ဓာကိုယ် induction Casserole -sc049 ply
12pcs 5ply အားလုံးဝတ်သံမဏိထမင်းပေါင်းအိုး Set-sc065b
18pcs 5ply အားလုံးဝတ်သံမဏိထမင်းပေါင်းအိုး Set-sc018
This cookware set is made of 3-ply composited material copper clad with fast and even heat retention, ထူနံရံများနှင့်အတူပိုကောင်းအပူစီးကူး, ဒီအစုံကအရမ်း elegent နှင့်လက်တွေ့ကျသည် ,high-gloss ခန္ဓာကိုယ်, သော induction သဟဇာတ. the inside of pan has detailed capacity marks. ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်.
မူလနေရာ: ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်
ကိုယ်ခန္ဓာ: composited 3ply material copper clad
ဖြူ: 1.0မီလီမီတာသံမဏိ 304 အဖုံး
ကိုင်တွယ်နှင့်ဖု: pricture အဖြစ်သံမဏိလက်ကိုင်နှင့်ဘူးသီးကိုသွန်းလေ၏
ဝန်ဆောင်မှု: ODM, OEM ရနိုင်သည်
သတ္တုအမျိုးအစား: 3ကြေးနီ Ply ဝတ်
ထုပ်ပိုး: အဖုံးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ယက်မဟုတ်သောအိတ်, လက်ဆောင်သေတ္တာထုပ်ပိုးထွက်.
လိုဂိုတံဆိပ်ရိုက်နှိပ်နိုင်ပါတယ်, ပိုးပုံနှိပ်ခြင်း, စွဲ & လေဆာရောင်ခြည်
လိုဂို၏ဒီဇိုင်း & ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အဖြစ်ထုပ်ပိုး
45နှင့်အတူအမိန့်အတည်ပြုပြီးနောက်ရက်ပေါင်း 30% အပ်ငွေ
မော်ဒယ် 13PCS 3PLY COPPER CLAD BODY COOKWARE SET
16×8.0cm saucepan w/lid 18×9.0အဖုံး w / စင်တီမီတာပြီနောက်ဟင်း
20×4.0cm skillet 24×4.5စင်တီမီတာ frypan
ပစ္စည်း 2.5MM ပေါင်းစပ်ခန္ဓာကိုယ်: 304 0.5မီလီမီတာ + alu. 1.5မီလီမီတာ + ကြေးနီ 0.5mm
ပေးပို့ခြင်းအသေးစိတ် 45 -55သိုက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း
ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ T / T(30% ကြိုတင်ပြီး,70% တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ)
က:ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းများသည်အမျိုးမျိုးသောဖောက်သည်လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်, အဓိကအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းအထိ, အရွယ်အစား, အထူ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ထုပ်ပိုး. .ငါတို့သည်သင်တို့၏စိတ်ကြိုက်လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးသင်အတိအကျစျေးနှုန်းပေးပို့ပါလိမ့်မယ်.
က:ဟုတ်တယ်, ကျနော်တို့ OEM အတွက်ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံရှိသည် / 15 နှစ်များအတွက် ODM ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကြီးမားသောအမှတ်တံဆိပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ,ငါတို့သည်သင်တို့၏နမူနာသို့မဟုတ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရေးဆွဲနေဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည် , ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များအတွက်မှိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်.
က:ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့် LC ကိုမျက်မှောက်တွင်သို့မဟုတ် T / T ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံသည်။ ပုံမှန်အမှာစာများ, ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ 30% အပ်ငွေ,ပေးပို့ခြင်းမပြုမီအပြည့်အဝငွေပေးချေမှု.
က:ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ကြာပါသည် 45 ရန် 55 နမူနာအတည်ပြုပြီးနောက်နှင့်သင်၏ကြိုတင်ပေးငွေကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ပထမ ဦး ဆုံးမှာယူရန်ရက်.
က: ဟုတ်တယ်. ဤသည်စွမ်းဆောင်ရည် cookware ဖြစ်ပါတယ်. ၎င်းသည်အလွန်မြန်သောအပူရှိန်ကြောင့်အလူမီနီယမ်ကိုနံရံ၏အလယ်တွင်ပေါင်းစပ်ထားသည်, ကအကောင်းဆုံးအပူစပယ်ယာဖြစ်ပါတယ်, ပိုထူသောနံရံများကြောင့်ကြာကြာနွေးနိုင်သည်.
က:သေချာပါတယ်, ကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်၏ဆိပ်ကမ်းသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ forwarder မှစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကိုသင်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်ကူညီပေးပါမည်။ ,အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောထုပ်ပိုးမှုနှင့်အတူထုတ်ကုန်များလုံခြုံမှုရှိစေရန်နှင့်လုံခြုံမှုရှိစေရန်သေချာစေပါ
Cookware wholesale & ထုတ်လုပ်သူများ
E-mail ကို: shanhailtd@shanhailtd.com
လိပ်စာ: 14-219 Nanhai လမ်း, ဟွမ်, NanHai,ဖိုရှန်, Guangdong ,တရုတ်
နယူးရှိုင်းဟတ်စက် © 2021 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ